I-Sexy Slim Sex Dolls iyathengiswa ngexabiso eliphantsi
Eyona Dlim yamantombazana aDibeneyo yokuThengisa uMgangatho oPhakamileyo
Ngokophononongo, uninzi lwamadoda lukhetha amantombazana amancinci amancinci, kunye namashishini efashoni kunye nemodeli. Ithini incasa yakho? Nazi zonke zethu ubomi slim oonodoli bezesondo, abasuka kumazwe ahlukeneyo kodwa babe neminqweno efanayo. Banethemba lokufumana ikhaya labo. Banesimbo somzimba esigobileyo esifanelekileyo, esona sinomtsalane, banomlinganiselo ogqibeleleyo esinqeni ukuya kwisinqe, imilenze emide enemilenze eqinile, isolotya elityebileyo kunye namathambo esinyithi angaphakathi ahinjiswe ngokupheleleyo. Ngaba uyafuna ukufumana indawo yentliziyo yakho? Basenokuba yintombazana yakho egqibeleleyo.
Thenga oDoli beSondo abaSebenzelana neSondo ngexabiso eliphantsi
I-Skinny Sex doll Premium Small Body Sexy Silicone Girl
Oonodoli besondo be-Skinny okanye oonodoli besondo abancinci babe nomtsalane ngokupheleleyo kumadoda amaninzi. Abanye oonodoli bothando ababhityileyo okanye oonodoli bothando ababhityileyo banokuba namabele amakhulu okanye isifuba esicaba, kodwa ngokwesiqhelo, oonodoli ababhityileyo besini bade ngesinqe esibhityileyo, iingalo kunye nemilenze. Abanye ubomi bokwenyani oonodoli bothando olubhityileyo ibe nemilo ekufutshane-egqibeleleyo. Ngamnye oonodoli bothando zenziwe nge-TPE ekhuselekileyo okanye i-silicone, enolusu olugudileyo kunye noluqilima. Ubufazi babo kunye ne-esile zezona zimangalisayo kuba zakhiwe ukulinganisa umntu wangempela, ngoko unokonwabela ulonwabo lokwabelana ngesondo ngokungapheliyo. Eyona nto ibalulekileyo kukuba bakhaphukhaphu, umzimba wabo ubhetyebhetye kwaye kulula ukuhamba ukuhlangabezana nayo nayiphi na intshukumo yesini onayo.
Eyona ntombazana i-Silicone e-Sexy Skinny yi-Petite Body Love Dolls
Ziyi-sexy skinny dolls ezinomfanekiso omncinci, ezinobuso obuyinyani kunye nobuso obuhle. Bawonwabisa nawuphi na umlomo wendoda, umngxuma wokukhupha ilindle, kunye nelungu lobufazi lakhe elihle neliqinileyo. Esinye sezizathu zokuthi uthanda isifuba esincinci kukuba banesinye sezona zibeleko zokwenene kweli xabiso kunye nobude.idilesi yesilicone yesini umatshini unokwandisa i Iidola zeWM isifuba kwaye uyisuse kwinyani ngexesha lokwabelana ngesondo. Amabele amakhulu anezibonelelo ezicacileyo, kodwa uya kukhetha oonopopi abanyanisekileyo kunaye nabani na, kuba basondele kuyilo lomzimba womntu, banokukhupha ngokukhawuleza iminqweno yakho yesondo eyomeleleyo, kwaye bahlangabezane nazo zonke iimfuno zakho.
Oonodoli boSondo abaNcinci obufana noBomi bayathengiswa
Phantse onke amadoda ayabathanda abafazi ababhityileyo, kwaye noonodoli bethu bothando olubhityileyo olufana nobomi okanye oonodoli bothando ababhityileyo balapha ukuze banelise ingcamango yakho. Xa ubona igophe eligqibeleleyo le unodoli wothando obhityileyo ongokoqobo, amabele amancinci, iingono ezipinki, kunye ne-esile e-slinky, uya kuba nemincili. Ngokuqinisekileyo ungasebenzisa aba nodoli bahle ababhityileyo ukwenza nantoni na, njengokubonisa iqabane lakho elilelona lalano ngesondo kwibalcony kwaye ulale naye kwaye uyonwabele. Uya konwabela i-butt yakhe entle kunye ne-vagina e-sexy eya kukutsala ngaphezu kwayo yonke enye into. Iinwele ezintle ezi-blonde, umzimba omncinci, isinxibo esimangalisayo, kunye neqabane elifanelekileyo lezesondo elinothando lokwenyani, uya kuba lolona khetho lwakho lulungileyo.
Ngaba uyawathanda amantombazana anomfanekiso we-noodle? Ubuso babo buhle kwaye imizimba yabo encinci ayinayo imvakalelo yokwenene yothando ngexesha lokwabelana ngesondo. Ukusebenzisa unodoli wesondo obhityileyo opheleleyo uya kukwenza uzive ngathi unomfazi wokwenyani. Nangona kunjalo, kula mantombazana amnandi kwaye amnandi, phantse wonke umntu akanakuziva le mvakalelo. Kodwa ngenxa yesizathu esithile, ukuba oku oonodoli besondo be-tpe Ubungakanani bukulungele, ngokuqinisekileyo liqabane lakho elingcono kakhulu lobomi kunye neqabane lezesondo.